Shock Absorber, Cv Joint, Auto Mpụga Cv nkwonkwo, Clutch Disc - Long Wind
Long Wind Group, nke dị na Ningbo, bụ nkwonkwo aka nke ọtụtụ ndị na-emepụta na ụlọ ọrụ azụmaahịa hiwere. Anyị bụ ndị ọkachamara ma na mmepụta na ibubata & mbupụ ọrụ. Otu anyị nwere ihe karịrị afọ 10 nke imepụta Shock Absorber, Nkwonkwo Ball, Akụkụ Rubber, Mkpuchi Clutch, Disc Clutch, CVJoint, Cylinders, Belt, Pump Water na na. Ahịa ahụ na-ekpuchi Europe, North America, South America na Africa, na-ere ahịa kwa afọ karịa $ 20,000,000. Brandsdị ndị ọzọ gụnyere LWT, SP, na UM nwetara ogo dị elu nke ịmara ahịa na Middle East, Ndịda Ebe Ọwụwa Anyanwụ Eshia, Central Asia na Africa.
Auto Parts Water mgbapụta N'ihi Toyota Camry ASV50 OEM C
Auto Parts Shock Absorber N'ihi Toyota Corolla AE ...
Japanese Car Euter CV Joint TO-04 Na ABS N'ihi ...
Auto Parts ipigide Cover CT-104 N'ihi Land Cruiser ...
Kedu mgbe njigide akwụkwọ ntuziaka na-agbanwe? Anyị sh ...
Ngwongwo ntanye nke nnyefe ntuziaka bụ nke ndị na-eri ihe. Na ojiji nke ụgbọala, ipigide efere ga-eyi ntakịrị. Mgbe ejiji ruru ogo ụfọdụ, ọ dị mkpa ka edochi ya. Kedu ka anyị ga-esi mara na ...
Ngwa ahịa ọkụ dị ugbu a na Enweghị M ...
Afọ a abụrụla ihe siri ike nye anyị niile n'ihi ọrịa corona. Anyị nwere olile anya na anyị nwere ike ịrụkọta ọrụ ọnụ ịlanarị ma nwee ọganiihu. Anyị akwadebewo ọtụtụ ụlọ nkwakọba ihe na China na Dubai maka gị. Ọ bụrụ na ị ga ...
Otu-akwụsị ọrụ maka jikọtara Mbupu
1. 1 MOQ mpempe, awa 24 nzipu. 2. Direct-ire na-echekwa na Dubai na Guangzhou 3. Big ngwaahịa nnweta 4. Complete ngwaahịa oké njọ na ihe karịrị 7000+ dị iche iche Koodu 5. mwekota nke 8 emepụta na ndị ọzọ nke ...